Amafutha we-algae iyisimo se-feedstock esimeme sokukhiqiza kwe-biodiesel. Kuyinto ehlukile kuma-feedstocks adumile, njenge-soya, i-canola nesundu. I-Ultrasonication ithuthukisa ukukhipha kwamafutha kusuka kumaseli algae nokuguqulwa ku-biodiesel.
Uma kuqhathaniswa nezitshalo zendabuko yembewu, ama-algae akhiqiza amafutha amaningi ngamahektare. Ngenkathi i-soybean ikhiqiza kancane kancane ama-acre angu-50 nge-acre kanye ne-rapeseed ikhiqiza engaphansi kuka-130 engamakhilogremu ama-acre, ama-algae angakwazi ukuletha amamitha angu-10 000 ngehektare ngalinye. Ngokuyinhloko i-diatoms ne-algae eluhlaza yimithombo enhle yokukhiqizwa kwe-biodiesel.
Njengezinye izitshalo, i-algae igcina amandla ngendlela ye-lipids. Kunezindlela ezihlukahlukene zokukhipha amafutha, njengokucindezela, ukugeza kwe-hexane nokuxazulula Isizinda se-Ultrasonic.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Algae Oil
Ukunikezwa ngokweqile kweziphuzo kudala amagagasi omsakazo asakaze emithonjeni yezamanzi eholela ekushintsheni imijikelezo ephakeme kakhulu nokucindezela okuphansi. Ngesikhathi umjikelezo ophansi ocindezelayo, ama-bubbles amancane okugcoba aphezulu kakhulu adalwe ketshezi. Lapho ama-bubbles athola usayizi othize, awela ngokuhlukumeza ngesikhathi somjikelezo ophezulu wokucindezela. Lokhu kubizwa ngokuthi i-cavitation. Ngesikhathi implosion ukucindezeleka eliphezulu kakhulu futhi ijubane liquid jets akhiqizwa endaweni. Amandla avela ukuphuma kwekhanda aphule isakhiwo se-cell futhi athuthukise ukudluliswa kwezinto. Lo mphumela usekela ukukhipha kwe-lipids kusuka ku-algae.
Ukuxubana kwe-Ultrasonic kuthuthukisa izinga lokuguqulwa kwe-biodiesel, kwandisa isivuno futhi konga i-methanol eyeqile ne-catalyst. Isithombe sikhombisa ukufakwa kwe-3x I-UIP1000hdT (i-1kW ngayinye) esitshalweni se-biodiesel.
Itafula ngakwesokudla ibonisa izidingo zamandla ezijwayelekile zokugeleza kwevolumu ehlukahlukene. Uhlelo lwe-ultrasonic luvame ukudidiyelwa ngaphakathi. I-reactor ye-ultrasonication ingaba kalula i-retrofitted ezindaweni ezikhona, ngcono i-algae isizinda.
0.3 – 1.5m³ / hr
Ukulungiselela kwe-Ultrasonic kokucindezela okubandayo kwamafutha we-Algae
Ngokuyinhloko ngenhloso yokucindezela, ukulawulwa okuhle kokuphazanyiswa kwamaseli kuyadingeka, ukugwema ukukhululwa okungenakuphikiswa kwazo zonke imikhiqizo ye-intracellular kubandakanya i-cell debris, noma i-denaturation yomkhiqizo. Ngokuphula isakhiwo seseli, i-lipids eyengeziwe egcinwe ngaphakathi kwamaseli ingakhululwa ngokusetshenziswa kwengcindezi yangaphandle.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic Solvent kwe-Algae Oil
Imijikelezo ephakeme yamagagasi e-ultrasonic asekela ukusabalalisa kwe-solvents, efana ne-hexane engxenyeni yeseli. Njengoba i-ultrasound iphula umshini weseli ngokusebenza ngamandla we-cavitation shear, yenza kube lula ukudlulisa i-lipids kusuka esitokisini ibe yilawo mandla. Ngemuva kokuthi amafutha ahlakazwe ku-cyclohexane i-pulp / izicubu zihlungiwe. Isixazululo si-distilled ukuhlukanisa amafutha avela ku-hexane. Ukuze i-sonication yeziphuzo ezivuthayo noma izixazululo ezindaweni eziyingozi Hielscher inikeza FM kanye ne-ATEX-certified systems ultrasonication, njenge- I-UIP1000-Exd.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic Enzymatic ka-Algae Oil
Imiphumela enamandla ye-synergetic ingabonwa lapho ihlanganisa ukwelashwa kwe-enzymatic nge-sonication. I-cavitation isekela ama-enzyme ekungeneni kwamathambo, okuholela ekukhuleni okusheshayo kanye nokuvunwa okuphezulu. Kulesi simo amanzi asebenza njenge-solvent kanti ama-enzyme ahlaziye izindonga zamaseli.
Biodiesel kusuka e-Algae Oil
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonication ekukhiqizeni kwe-biodiesel.
Ukucubungula Amafutha we-Ultrasonic Algae Kusuka Esilinganisweni Sokushayela Ukuya Ekukhiqizeni
Sincoma ukuhlolwa kwesilinganiso se-pilot isib, ngokusebenzisa izinhlelo ze-1kW. Lokhu kuzobonisa imiphumela jikelele kanye nokuthuthukiswa kwenqubo yakho ethile yokusakaza. Yonke imiphumela ingahle ihlanganiswe ngokukhambelana nemifudlana emikhulu yenqubo. Sizojabula ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sincoma izinyathelo ezengeziwe.
I-Ultrasonic esterification ne-transesterification ingaqhutshwa njengenqwaba noma inqubo eqhubekayo yomugqa. Ishadi likhombisa inqubo esemgqeni we-ultrasonic ye-biodiesel (FAME) transesterfication.
Uhlelo lwezezimboni lwe-Ultrasonic olunokugeleza kweseli kwe-inline biodiesel esterfication kanye ne-transesterification.
Ama-Ultrasonicators Wosayizi Omaphakathi Nosayizi Omkhulu Wokukhiqizwa Kwe-Industrial Biodiesel
Hielscher Ultrasonics’ ihlinzeka ngosayizi wezimboni ophakathi nendawo kanye namaprosesa amakhulu asezimbonini asebenza ngokukhiqiza kahle kwe-biodiesel nganoma yiliphi ivolumu. Lonke uhlelo lungasetshenziswa ukwenza ngcono ukuguqulwa kwanoma yiluphi uhlobo lokuphakelwa okubandakanya uwoyela we-algae, uwoyela wemifino, amafutha ezilwane, uwoyela kadoti njll.
Njengoba iphothifoliyo yakwaHielscher ihlanganisa amasistimu e-ultrasonic kunoma yimuphi umthamo wokukhiqiza, singanikeza isisombululo esikahle sabakhiqizi abancane nezinkampani ezinkulu. Ukuguqulwa kwe-ultrasonic biodiesel kungenziwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo yomugqa. Ukufakwa nokusebenza kulula, kuphephile futhi kunika imiphumela ephezulu ethembekile yekhwalithi ephezulu ye-biodiesel.
Ngezansi uzothola ukusethwa okuphendulayo okuphendulayo kwamanani wamanani wokukhiqiza.
ithoni / hr
0.25 kuya ku-0.5
80 kuya ku-160
0.5 kuya ku-1.0
160 kuya ku-320
0.75 kuya ku-1.5
240 kuya ku-480
1.0 kuya ku-2.0
320 kuya ku-640
1.5 kuya ku-3.0
480 kuya ku-960
3.0 kuya ku-6.0
960 kuya ku-1920
4.5 kuya ku-9.0
1440 kuya ku-2880
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza ama-homogenizers asebenza ngokusezingeni eliphezulu avela ku- I-Lab kuya usayizi wezimboni.